Creative Writing » ပုံပြောကောင်းသူလေးများ	35
မြစပဲရိုး says: အစ်မ ရဲ့ အခု ခရီး ကို လိုက်ရရင်ကောင်းမလား တွေးခဲ့သေးတယ်။
ကျွန်မ ပြောတာ ကို ကိုယ့် အစ်မ နားလည်မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။ သဲတစ်ပွင့် တင်မက သဲတစ်ကျင်းလောက် ကို လုပ်ပေးနေနိုင်တဲ့ ကိုယ့်အစ်မ အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
Ma Ma says: အခုဆို အနည်းဆုံး ၄နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်။
ကိုယ်ထူးချွန်တာ (ကိုယ့်ဝါသနာ)ကို သိပြီး အဲဒီနေရာမှာ သူများထက်တော်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ လိုတယ်တဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပဲ လိုက်ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကို မဖျောက်နိုင်သေးလို့ အကြံပေးချင်တယ်။ ပုံပြောပြီးတဲ့အခါ ပုံပြောပြတဲ့သူကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ၀ိုင်းပြီးလက်ခုပ်တီးပေးကြရင်ကောင်းမယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း သူတပါးအောင်မြင်မှုကို မုဒိတာပွားပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်သလားလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အဲဒီနေ့က ကလေးတယောက်ပုံပြောပြီးတိုင်း ဆုပေးပြီး လက်ခုပ်တီးပေးကြပါတယ်။
padonmar says: ပုံပြောခိုင်းဖို့ စိတ်ကူးကတော့ ချစ်မက စတာပါပဲ။
lu lu says: ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ အန်တီဒုံ ရယ်
ခင်ဇော် says: မေ လူကြုံ နဲ့
Alinn Z says: သူတို့ပြောတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ
padonmar says: အန်တီ ဒီတခေါက် ပြန်လာမှ ကလေးတွေ ပုံပြောတာလေး ဗီဒီယိုရိုက်ထားရကောင်းသားလို့ တွေးမိတယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အာတီဒုံပုံပြောတာ နားထောင်ချင်ထှာ.. အနော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင် ပုံပြောခိုင်းရင် ခေါင်းထဲက ထွက်လာဖို့ အတော်ကြာမယ်ထင်တယ်… သူတို့လေးတွေ မှတ်မိသလောက်နဲ့ ခုလိုမျိုး ထွက်ပြောကြတာ.. ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်… အနော်တောင် ခု public speaking သိပ်မလုပ်ရဲတော့ဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: အားကျပါတယ် အန်တီဒုံ။ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်လှတဲ့အလုပ်မို့ နောက်နှစ်အနားနီးရင်သတိပေးပါအုံး။ ကလေးတွေဖို့လက်ဆောင်လေးတွေပေးချင်လို့။
lamin ngel says: ကိုယ်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လုပ်နိုင်လို့လုပ်တဲ့သူတွေကိုလေးစားတယ်။အားပေးတယ်။တနေ့ထက်တနေ့ပိုအောင်မြင်ပါစေ
ဦးကြောင်ကြီး says: ခိုနီအာတီဒုံဂျီး .. အနော့်ဂို ဘာပုရို့ ဘော့တွားဒါရဲ….. အီလုတ်သမားဂ တိုးအတောင်းဒေါ့ပါပူး.. ပျံအတ်ပေးပါ… အီးဟီးဟီး.. .သဗိတ် သဘိတ် မမှောက် မမှောက်
အောင် မိုးသူ says: ကလေးတွေဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ လူကြီးတွေပေါ့။ တီဒုံရည်ရွယ်ချက်လေး အရမ်းကောင်း။ သဘောကျမိ။
Mike says: .တွေ့ရမြင်ရတာကြည်နူးစရာပါ…သာဓု သာဓု သာဓုပါ
padonmar says: လုလု၊မွသဲ၊လမင်းငယ်၊အောင်မိုးသူ၊ဦးမိုက်တို့ရေ
uncle gyi says: ဘာပြောပြောမြန်မာမှာကလေးတွေကိုလူရှေ့ထွက်စကားပြောတာငယ်စဉ်ကတည်းက
padonmar says: အန်ကယ်ဂျီးရေ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အမလေး …
padonmar says: အံစရာ ရေးမှ ကိုယ် ကလေးဗိုလ်ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်။
padonmar says: ညဖက်လေး အချိန်ရတုံး ကွန်မန့်တွေ အချိန်လုပြန်နေတာ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အို .. ဖျက်နေပါနဲ့လို့ …
black chaw says: နောက်နှစ် ကျရင် သီချင်းဆိုခိုင်းပါ လို့ အကြံပေးပါရစေခင်ဗျ…။
padonmar says: ကိုဘလက်
Alin cho says: အန်တီဒုံရေ
ဦးကြောင်ကြီး says: .. အလင်းချိုလေး
Alinn Z says: အလင်းချို ဆိုတာက… Alinn Z နဲ့ ဘာတော်လဲဟင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: Yay!!!!
kai says: တချိန်ချိန်… အဲဒီကလေးတွေထဲကနေ.. ဦးသန့်လိုလူ ထွက်မလာဘူးလို့.. မပြောနိုင်…။
Ma Ei says: အားကျလိုက်တာအမရယ်…
ဦးကြောင်ကြီး says: ခိုနီအာတီဒုံဂျီး မြတ်နှာ ပျားအုံနေဒရယ်.. မဟာခိုနီ၈ျီး ဖစ်တော့မည် နမိတ်ရား..
Mr. MarGa says: အားကျ
Alin cho says: ပခုံးသေး၍ ပခုံးပြောင်တာဝန် မထမ်းဆောင်နိုင်သေးပါကြောင်း။ တီဒုံရဲ့ နိုင်ရာဝန်ထမ်းပုံလေးကို ၀မ်းမြောက်အားကျရပါတယ်။ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ အားပေးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်။
manawphyulay says: မီးမီးကိုကော ပေးမှာရား… မီးမီးရဲ ပုံကျောကြရယ်ရေ…
ဟိုးချေးချေးဒုံးက ရွာကြီးတစ်ရွာ ရှိပါတယ်။ ရွာကြီးမှာ အမတန် ဂဂျီဂဂျောင်များပြီး အားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကျောတတ်တဲ့ တဂျီးဆိုသူရှိသတဲ့ကွယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.